မယ့်ကိုး: ဝင်ကစွပ်ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှု
စာရေးသူ မယ့်ကိုး at 2/15/2012 09:00:00 AM
ဖတ်လို့ကောင်းတယ်ဗျာ... ဖတ်ပြီးတော့ ဘယ်လိုပြောရမယ်တောာင်မသိတော့ဘူး.... ကျွန်တော်ကတော့ အနိုင်အရှုံးထက် ပျော်ရွှင်နေတဲ့ဘ၀လေးထဲမှာ ပျော်ပျော်ပဲ နေစေချင်တယ်.... ဘ၀ဆိုတာ တိုတိုလေးလေ...
15/2/12 10:36 AM
မမ...စာရေးကောင်းလိုက်တာ။2ယောက်လုံးရဲ့ စိတ်ကိုဖမ်းမိဖို့ သေချာဖတ်သွားပါတယ်။
ဒါနဲ့ ထောပတ်သီးဖျော်ရည် က တကယ် ဗိုက်အဆီကျလားဟင်း)။
15/2/12 11:06 AM
Ko Nay Wathan and nyimalay Naunt ....Thanks so much for ur kind comments .
Nyimalay Naunt.... Yes , dear . The avocado juice can reduce belly fat :)
15/2/12 11:49 AM
ဒီဝတ္ထုလေးကို ရွှေဒေါင်းတောင်မှာ ဖတ်ရထဲက သဘောကျမိတာ...း)
ယောကျာင်္းတွေကိုက ဒုတိယ မိန်းမ မျိုးကိုသဘောကျတာ
သူတို့ မရှိ ရင် သေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ မိန်းမ မျိုးကို သဘောကျတာ မ ရေ
15/2/12 12:32 PM
ှSaw Thin Mya Hlaing said...
လွတ်လပ်ခြင်းဆိုတာ အထီးကျန်သူတွေ သုံးနေကျဆင်ခြေပါ။ လောကမှာ ကိုယ်မရှိရင် မဖြစ်ဘူးလို့ ပြောတဲ့၊ ကိုယ့်ကို လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ ကြိုးတွေကသာ အသက်ရှင်ခြင်းကို အဓိပ္ပါယ်ရှိစေတာ မဟုတ်လား။
မယ်ရေ အဖြေတစ်ခု ရလိုက်သလိုပဲ ........
17/2/12 4:33 PM
သူရခဲ့တယ်ထင်တဲ့ အနိုင်က တကယ်တော့ အရှုံးပဲ။
စကားလုံးတွေ သုံးနှုန်းပြီး သူ့ကိုယ်သူလှည့်ဖျားလား လှည့်ဖျားရဲ့။
သူရခဲ့တယ်ထင်တဲ့ အရာတစ်ခုကို ဆုပ်ကိုင်ထားတာတောင် အဲ့အမျိုးသမီးမှာ ပူလောင်နေရတယ်။ စာထဲကနေတောင် အပြင်ကို လာဟပ်အောင် ရေးထားတာ သိပ်ကောင်းတယ်။ :)
22/2/12 12:12 PM
သဘောအကျမိဆုံးကတော့ အပျော်ကြံတာပါဟာ လို့ပြောတဲ့စကားလေးပဲ။ လွတ်လပ်ခြင်းဆိုတာ အထီးကျန်သူတွေ သုံးနေကျဆင်ခြေတဲ့လား မယ့်။ ဒါဆို ကျနော်လဲ အဲဒီဆင်ခြေဆင်လက်ကတော့ အမြဲသုံးနေကျပဲ။ အချုပ်အနှောင်တွေကို သိပ်မုန်းပါတယ် မယ့်ရေ။